Ndine nhumbu saka ndinonzwa kuda kuiswa everytime saka ndinobonyora kakawanda, pane zvazvinokanganisa panhumbu here? - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Ndine nhumbu saka ndinonzwa kuda kuiswa everytime saka ndinobonyora kakawanda, pane zvazvinokanganisa...
Ndine nhumbu saka ndinonzwa kuda kuiswa everytime saka ndinobonyora kakawanda, pane zvazvinokanganisa panhumbu here?
Tete Molly, Ndokumbirawo kubvunza. Ndakazvitakura apa murume wangu anoshanda kure saka toonana kaviri pamwedzi anouya oita mazuva matatu ari pano.
Nyaya yangu ndeiyi, Ndinonzwa kuda kuiswa chose saka ndinozvibatsira kakawanda.
Pane zvazvinokanganisa panhumbu here?
Kuzvibatsira uine mimba kunoitwa nevakadzi vakawandisa. Nyaya yedu ndeiyi. Kana une numbu mahormones ako anowanda mumuviri. Vazhinji vanowedzera zemo panongopera kurutsa zvokuti murume anofanirwa kutisunga dzisimbe nokuti anenge ava kupiwa basa hombe.
Zvinokwanisika kuti murume anoswera asipo kana kuti anoshanda kure achingouya kupera kwevhiki. Uri wega pamba hazvina kuipa kuzvibatsira kuita kuti utunde. Kugaroiswa nomurume uine mimba mazuva okutanga zvinobatsira kuti usasvodza uye mwana asazvarwa nguva isina kukwana. Kana murume asipo ukazvibatsira zvekusvika pakutunda zvakangofanana nekuiswa nemurume. Kusiyana kwazvo kuti unopiwa huronyo nemurume.
Kune vamwe vane varume vanoti akangonzwa nezvemimba ototya kusvira mukadzi wake. Kana une murume akadai watoita dambudziko hombe. Kuzvibatsira wotowedzera.
Koitazve vamwe vanoita zemo nguva dzese nekuda kwemimba. Murume anombozama asi anokundikanawo. Unokwanisazve kuzvibatsira wega.
Asi nzwisisai kuti kukwiza pabhinzi nematinji kwakasiyana nokupinza mboro mukati. Kana ukada zvokupinza mboro mukati, nzwisisa mapinziro asingakuvadze uye tanga wageza chaunopinza chacho kuti chisava netsvina.
Hapana chakaipa kuzvibatsira asi kune vamwe vanotoudzwa navarapi kuti imbomirai kuisana kusvika mimba yati kurei.
kuzvibatsira kana wakazvitakura